Global Voices teny Malagasy · 11 Mey 2011
11 Mey 2011
Tantara tamin'ny 11 Mey 2011
Tratry Ny Tazo Bieber i Brunei
Azia Atsinanana11 Mey 2011
Hanao fampisehoana goavana any amin'ny firenena maro ao atsimon'i Azia i Justin Bieber saingy toa adinony kosa i Brunei. Ary izany dia nanosika ireo mpankafy an'i Bieber ao Brunei hampiasa ny aterineto amin'ny alalan'ny twitter, bilaogy, sy youtube mba handresena lahatra ity mpihira ity hitsidika an'i Brunei.
Niverina an-dalambe n itaky indray ny fialan'ny governemanta ry zareo Toniziana, taorian'ireo fanambaràn'ny Minisitry ny Atitany teo aloha Farhat Rajhi nivoaka tao amin'ny pejy Facebook iray fa hoe hitohy hotantaninà governemanta miafina i Tonizia, tarihan'ny naman'i Ben Ali iray, dia i Kamel Ltaief ankoatry ny zavatra hafa. Ary indray mandeha...
Iran: Misambotra Alika (indray)
Niverina eny an-dalambe ny mpitandro ny filaminana Iraniana mba hanohy indray ny fihetsika manala-baraka tamin'ny taona 2007: Fisamborana alika. Naharitra fotoana fohy ihany ny fisamborana alika farany teo, ary noafahana haingana avy eo ireo alika ireo. Ankehitriny, araka ny voalazan'ny gazety Iraniana, alika maromaro no nalaina ankeriny ary nafindra ”...